Barcelona oo wada hadallo la billawday Man City oo ay kaga dooneyso xiddig muhiim ah – Gool FM - Idman news
(Barcelona) 01 Dis 2021. Barcelona ayaa dhawaan wadahadal la gashay Manchester City, taasoo ku saabsan saxiixa ciyaaryahankeeda Ferran Torres, kaddib markii uu codsi ka helay tababare Xavi Hernandez.
Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, waxaa jira calaamado muujinaya inuu dhici karo heshiiska maalmaha soo socda, si loo dhameystiro qandaraaska suuqa furmi doona bisha January ee soo aadan.
Wargayska ayaa intaas ku daray in Pep Guardiola oo ah tababaraha kooxda Man City aanu waxba ka qabin bixitaanka Ferran Torres, sidaas darteedna ay arrimuhu ku xiran yihiin heshiiska labada kooxood.
Kooxda reer England ayaa dooneysa inay si joogto ah u iibiso xiddiga heerka caalami ee dalka Spain, oo aysan amaah ku siin Barca, taasoo ay sidoo kale dooneyso Barcelona, laakiin laga bilaabo xagaaga soo aadan.
Dhankiisa wargeyska Mundo Deportivo ayaa sharaxay in Blaugrana ay amaah ku heli doonto ciyaaryahanka 6 bilood kaliya, oo ay u badan tahay, sababa la xiriira duruufaha dhaqaale ee adag oo ay kooxda ku jirto, iyada oo ay ku qasbanaan doonto inay iibsato suuqa xagaaga soo aadan.
Si kastaba ha noqotee, tababare Xavi ayaa ku adkeysanaya inuu xaliyo heshiiska Ferran Torres, sababtoo ah wuxuu ku fiican yahay ka ciyaarista dhammaan boosaska dhanka weerarka, si fiican ayuuna u yaqaan jawiga horyaalka La Liga.
Previous “Waxaan kula taliyay Mbappe inuu ku biiro Real Madrid” – Zlatan Ibrahimović – Gool FM
Next Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Watford iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey – Gool FM
Bruno Fernandes oo hakad geliyey wadahadalladii heshiis kordhinta Kooxda Manchester United – Gool FM
17 hours ago Mohamoud